कञ्चनपुरमा पित्तर असराई र सखिया नाच (फोटो फिचर) – Tharuwan.com
October 3, 2014 October 6, 2014 admin
दसैको आठौं दिन अर्थात् अष्टमीका दिन थारु महिलाहरु पित्तर असराईका लागि गाउँ नजिकैको खाली स्थानमा भेला हुने गर्छन्। ती महिलाहरुले खानाका विभिन्न परिकारसँगै जाँड पनि खाने चलन छ। यससँगै थारु युवतीहरु सखिया नृत्य नाच्न‍े गर्छन्। कञ्चनपुरबाट गीता चौधरीले पठाएका केही तस्बिर हेर्नुस्:
2 thoughts on “कञ्चनपुरमा पित्तर असराई र सखिया नाच (फोटो फिचर)”
Specially thanks to gita chaudhary who provide these shots.
अबोध बाबु says:
खुशी लागल हमर सस्कृती के एक झलक देख मिलल म… गीता चौधरी हन धकिया भर भर धन्यवाद !!
कुन गाँउके फोटो हो तर?